प्रकाशको जनावर र विरोधीको आत्मा - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
जनवरी २९, २०२२ मे ४, २०१९ द्वारा प्रकाशक
जब प्रकाशले दुष्ट जनावरहरूको कुरा गर्छ, के यसले पृथ्वीमा शासन गर्ने शक्ति भएका राज्यहरूको कुरा गरिरहेको छ? हो।
यसलाई आफै पढ्नुहोस् र यो धेरै स्पष्ट छ कि यी जनावरहरूको टाउको र सिङहरूले पृथ्वीमा अख्तियार र शक्तिको उच्च स्थानहरूमा मानिसहरूको कामलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो पनि स्पष्ट छ कि शैतानको भ्रामक शक्तिहरू वास्तवमा यी जनावरहरू जस्तै पुरुष र स्त्रीहरूको नियन्त्रणमा छन्। प्रकाश 12 औं र 13 औं अध्यायमा, जनावरहरू जनावरहरूको राज्यको विरुद्धमा परमेश्वरको राज्यको युद्धको सन्दर्भमा प्रकट गरिएको छ। 17 औं अध्यायमा, "आठौं" जनावरलाई राजा र राज्यहरूको सन्दर्भमा वर्णन गरिएको छ: सबै पार्थिव राज्यहरूलाई एउटै अन्तिम जनावरमा तानेर।
तपाईंले सायद “एउटै विश्व सरकार” वा “नयाँ विश्व व्यवस्था” आउँदै गरेको सुन्नु भएको छ। के यो अन्तिम आठौं जनावरको सन्दर्भलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ? हो तिनीहरू गर्छन्।
विश्व सरकारहरूमा यी परिवर्तनहरू अन्य राजनीतिक "संगठन गर्ने शक्तिहरू" मा निरन्तर वृद्धि हो जुन तपाईंले चर्चहरूको विश्व सल्लाह र संयुक्त राष्ट्रहरू जस्तै सुन्नु भएको छ। तिनीहरू सबै मानिसहरूका सरकारहरू हुन् (जससँग जनावरहरू जस्तै स्वभावहरू छन्), र फलस्वरूप तिनीहरू पशु-जस्तै शक्ति संरचनाहरूमा भेला हुनुपर्छ। र तिनीहरू सबैसँग ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा छ।
तर यो कुनै नयाँ कुरा होइन। ख्रीष्ट पहिलो पटक आत्माहरूलाई बचाउन र आफ्नो पवित्र राज्य स्थापना गर्न पृथ्वीमा आउनुभएदेखि नै यही हो।
"पृथ्वीका राजाहरू खडा भए, र शासकहरू प्रभु र उहाँको ख्रीष्टको विरुद्धमा भेला भए। तपाईंको पवित्र सन्तान येशूको विरुद्धमा सत्यको कारण, जसलाई तपाईंले अभिषेक गर्नुभएको छ, हेरोद र पन्तियस पिलातस दुवै गैर-यहूदीहरू र इस्राएलका मानिसहरूसँग भेला भएका थिए, किनकि तपाईंको हात र तपाईंको सल्लाहले पहिले नै निर्णय गरेको कुरा गर्नको लागि। ।" प्रेरित 4:26-28
हेरोद र पोन्टियस पिलातस, र अन्यजातिहरू र यहूदीहरू सबै एकअर्कालाई घृणा गर्थे। तर जब तिनीहरूले ख्रीष्टलाई भेटे, तिनीहरूले येशू र उहाँको राज्यलाई आफ्नो राज्यको लागि खतरा पाए। त्यसैले तिनीहरू अचानक राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुको विरुद्धमा लड्न एकसाथ आए। र यसरी तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे, र पछि ख्रीष्टको राज्यका मानिसहरूलाई सताए। तर तिनीहरूको राज्यको अन्त्य भयो। र मुक्ति र पवित्र जीवनको ख्रीष्टको राज्य, उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको हृदयमा आज पनि जीवित छ।
र सुसमाचारको सुरुदेखि नै लडाइँ चलिरहेको छ। तर किनभने शैतानको पहिलो जनावर, ड्र्यागन, आत्माको तरवार, परमेश्वरको वचनले धेरै प्रभावकारी घाउ निम्त्याएको थियो: उसले अर्को राज्यमा पुनर्गठन गर्नुपर्‍यो (प्रकाश १२ र १३ हेर्नुहोस्)। यसैले हामीसँग जनावर छ, र अर्को अर्को जनावर र छवि परमेश्वरको राज्य विरुद्ध लड्न। (यस सबैको बारेमा धेरै पछि भनिन्छ।)
समस्या यो हो कि आज मानिसहरू एक व्यक्तिमा पूरा भएको एउटा ठूलो एन्टीक्रिस्ट खोजिरहेका छन्। जसरी तिनीहरू बाहिरी रूपमा पशु-शक्ति उत्पन्न हुन खोजिरहेका छन्। तर ख्रीष्ट विरोधी र जनावर दुवै पहिलो आध्यात्मिक अवस्थाहरू हुन् जुन प्रत्येक व्यक्तिमा अवस्थित हुन्छ, जबसम्म तिनीहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत राज्य येशू ख्रीष्ट र उहाँको राज्यलाई दिएका छैनन्। यस संसारको "एकसाथ भेला भएका" राज्यहरूलाई "जन्तुहरू" भनेर वर्णन गरिएको कारण हो किनभने तिनीहरू अझै पनि पापी जनावरहरू जस्तै स्वभाव भएका मानिसहरू मिलेर बनेका छन्। फलस्वरूप, तिनीहरूसँग पापी जनावरहरू जस्तै स्वभाव भएका नेताहरू पनि छन्। यो "नयाँ विश्व व्यवस्था" लाई जनावर जस्तै बनाइने व्यक्तिहरूको स्वभाव हो।
प्रश्न "तपाईको स्वभाव कस्तो छ?" किनकि यसले परमेश्वरको अगाडि निर्धारण गर्नेछ कि तपाईं जनावरको भाग हुनुहुन्छ वा होइन। यसैले मैले अघिल्लो पोस्टहरूमा यो व्यक्तिगत आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छु कि सबैले आफ्नो पशु प्रकृतिबाट छुटकारा पाउनुपर्दछ। तपाईंले ती पोस्टहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ:
666 ब्यालेन्समा तौलिएको जनावरको संख्या
त्यसोभए यो एकल एन्टिक्रिस्टको बारेमा के आउनु पर्ने छ? मलाई थाहा छैन? मैले धर्मशास्त्रमा त्यस्तो कुनै विवरण फेला पार्न सक्दिन। तर यसको सट्टा मैले धर्मशास्त्रले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाउँछु कि त्यहाँ धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरू छन्, र तिनीहरू सबै येशूको समयदेखि नै छन्। र यो एकल व्यक्ति होइन, तर यो एक दुष्ट आत्मा हो जसले धेरै मानिसहरू मार्फत काम गर्दछ, येशू र साँचो इसाईहरूको विरोधमा।
“साना बच्चाहरू, यो अन्तिम घडी हो; र जसरी तपाईंले ख्रीष्ट विरोधी आउँदै हुनुहुन्छ भनी सुन्नुभएको छ, अहिले पनि धेरै ख्रीष्ट विरोधीहरू आएका छन्, जसबाट हामी जान्दछौं कि यो अन्तिम घडी हो।” (१ यूहन्ना २:१८)
"र येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरको होइन। र यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जुन तिमीले सुनेका छौ, आउँदैछ र अहिले संसारमा छ।" (१ यूहन्ना ४:३)
त्यसोभए, के तपाईको गवाही हो: येशू ख्रीष्ट तपाईमा आउनुभएको छ? के उहाँको पवित्र आत्मा तपाईको शरीरमा राज्य गर्न आउनुभएको छ? के उहाँलाई तपाईंको पूर्ण आज्ञाकारिताद्वारा तपाईंको जीवनमा राजाको रूपमा सम्मान गरिएको छ? वा तपाईंमा येशूको विरोधमा अर्को पापी आत्मा छ। ख्रीष्ट विरोधी आत्मा अझै भित्र काम गरिरहेको छ?
"तर २ थेसलोनिकी दोस्रो अध्यायमा बोलेको पापको मानिसको बारेमा के हो?" हामी अर्को पोस्टमा यस "पापको मानिस" लाई जाँच्न थप समय लिनेछौं।
बीचमा, म तपाईंलाई सोध्छु: के तपाईं अझै पनि पापी जनावर-जस्तो प्रकृतिको प्रभावमा काम गरिरहनुभएको छ? के तपाईं अझै पनि त्यो भेलाको भाग हुनुहुन्छ जसले जनावरलाई जीवन दिन्छ?
कोटीहरू जनावर, झुटो चर्च, भगवानको राज्य, प्रकाश १३, प्रकाश १7 ट्यागहरू आठौं जनावर, संयुक्त राष्ट्र पोस्ट नेभिगेसन